Umkhiqizi wekhebula le-China Quality Ethernet, Factory - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula le-Ethernet
Le CAT7A Bulk Ethernet Cable, 10G Indoor / Outdoor Dual Shielded Solid Copper S / FTP, 23 AWG 1000ft iyi-10G Indoor / Outdoor Dual Shielded Solid Copper S / FTP, 23 AWG 1000FT ihlolwe ngamabhendi afinyelela ku-1000MHz. Ngokwengeziwe, le khebula lenethiwekhi linamabhangqa amane ama-23 AWG abaqhubi bezethusi abaqinile abanabaqhubi abavikelekile ngawodwana futhi athengiswa kuma-spools amamitha ayi-1 000.
Le CAT6A Patch Cable 10G Snagless iyi-CM elinganiswe ngejubane lenethiwekhi efinyelela ku-10G futhi ifaka izintambo ze-ANSI / TIA 568C.2, ibhantshi le-PVC, i-24AWG, izixhumi zethusi ezingenalutho nezixhumi ze-RJ45 ezisebenzisa oxhumana nabo abenziwe ngegolide ngamabhuzu okusiza okubunjiwe.
Le CAT8 Patch Cable iyi-wiring eyi-2, ijakhethi ye-PVC, i-24AWG, izixhumi zethusi ezingenalutho nezixhumi ze-RJ45 ezinabaxhumana abangu-50µ abafakwe igolide ngamabhuzu okwehliswa okusindayo. (UL / ETL / RoHs)
Izintambo zethu ze-CAT6 Patch Catch6 ezingavikelekile zilinganiselwe nge-CMX ngesivinini senethiwekhi esifinyelela ku-550MHz futhi sifaka i-wiring ye-ANSI / TIA 568C.2, ibhantshi le-PVC, i-24AWG, izixhumi zethusi ezingenalutho nezixhumi ze-RJ45 ezinokuthintana okufakwe ngegolide okusetshenziselwe ukucindezelwa kobunzima amabhuzu. (UL / ETL / RoHs)
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ikhebula le-Ethernet abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ikhebula le-Ethernet esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.